डा. चन्द्रमणि अधिकारी/
दुईतिहाई बहुमत सहितको बाम गठबन्धन नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक समृद्धिको इतिहास रच्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । ९ सय ४५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको बजेटमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि पहिलो पटक पूर्णरुपमा संघीय बजेट ल्याएको सरकारले गरिबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धनसहित दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि बजेटले आम जनतालाई उत्साह भने दिन सकेको पाइँदैन ।सरकारले ल्याएको बजेट, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीसँगै आउँदै गरेको मौद्रिक नीति र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रबारे अर्थ्विद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप ।
सरकारले सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई उहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो बजेट ‘मोर टेक्निकल, लेस पोलिटिकल’ बजेट छ । किनभने अहिले जुन राजनीतिक सरकार बनेको छ, जुन आधारमा सरकार बनेको थियो, बलियो सरकार बनेको छ । लामो समयपछि सत्तामा स्थायित्व आएको छ, त्यसले स्थायी सरकार बनेको छ र यो सरकारप्रति आमचाहना भनेको बजेटले विकासका कुरा समेट्ला, जीवनयापनमा सहजता होला भन्ने थियो । यसमा सरकार अलिकति सतर्क भएजस्तो देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले विकासका कार्यक्रमहरू तीव्र ढंगले आउला भन्ने देखिएको थियो, तर बजेटको गतिचाहिँ नीति तथा कार्यक्रमतर्फ नै देखिए पनि विकासको गति समेट्ने खालको आउन सकेको छैन ।
बजेटले के–के कुरालाई समावेश गर्न सकेन ? कहाँनेर चुक्यो सरकार ?
सामान्यतया मान्छेले नाप्ने भनेको बजेटको आकार नै हो । हिजो सामान्य अवस्था हुँदा बजेटमा २५–३० प्रतिशत वृद्धि हुने, तर बलियो सरकार बनिसकेको अवस्थामा भने सामान्य देखियो । अहिलेको बजेटको अंक गत वर्षको विनियोजनको अंक हेर्दा खासै वृद्धि भएजस्तो देखिएन । अर्का्तिर यसले अलिकति साधनस्रोतलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्छ कि, विनियोजन भइहाले पनि खर्च नहुने हो कि अर्थात् मुद्रास्फीति बढ्ला कि भन्नेतर्फ सरकार सतर्क भएजस्तो देखिन्छ । अहिलेको परिवेश र एक खालको वातावरण बनेको छ, त्यसलाई हेर्दा जनअपेक्षाअनुसार बजेटले अलि गति समात्नुपर्ने थियो, त्यो गति सरकारले समाउन सकेन, पुरानै शैलीमै बजेट आयो ।
यो बजेट कार्यान्वयनमा के चुनौती देख्नुभएको छ ?
मुख्य समस्या भनेकै कार्यान्वयन पक्ष हो । हिजोका दिनमा जस्तो यो वा त्यो बहाना बनाउने अवस्था अब छैन । यो बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो मुख्य चुनौती हो । अर्को भनेको बजेटले ९ सय ४५ अर्ब राजस्वको लक्ष्य लिएको छ । ९ सय ४५ अर्ब राजस्वमध्ये १ सय १४ अर्ब राजस्व बाँडफाँडमा जान्छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई विभाज्य कोषमार्फत जान्छ । अर्का्तिर पुँजीगत खर्च संघकै हिसाब हेर्दा अलि कम देखिएको छ, तर यो कमचाहिँ होइन । तीन तहको सरकार बनेपछि तीनवटा बजेट आउने भयो, यद्यपि टोटल भोलुममा हेर्ने हो भने केन्द्रबाटै गएको साधनस्रोत प्रयोग हुने देखिएको छ । किनभने स्थानीय तह र प्रदेशको राजस्व आर्जन गर्न सक्ने आधार तयार भएका छैनन् । त्यसमा शून्यमै छ । अहिले आर्थिक ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने छ । कुन कर के–केमा कसरी लगाउने भन्ने कुरा अन्योलमै छ । कुन कर वैज्ञानिक हो या होइन भन्ने कुरा प्रदेशले हेर्र्नै पाएको छैन । स्थानीय तहमा पनि हिजोका महानगरपालिका, नगरपालिकाबाहेकले खासै राजस्व उठाउन सक्दैनन् भन्ने छ । त्यसकारणले ती दुवै सरकारको बजेटको स्रोतको आधार भनेको केन्द्रबाटै जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडकै रकम भएकाले १ सय १४ अर्बलाई केन्द्रमै आउँछ । पुँजीगत खर्चको अनुपात केन्द्रको भन्दा बढी खर्च स्थानीय तह र प्रदेशमा हुन्छ । यो हिसाबले हेर्दा त्यति नराम्रो होइन । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी पुग्दैन कि भन्ने छ ।
बजेटले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य कसरी सम्भव छ ?
विचारमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका मुख्य चुनौती के–के हुन् ?
राजस्व बढाउँदा राजस्व बढाउने क्षमता के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो जीडीपी, हाम्रो खपत, उपभोग पर्छन् । त्यससँगै हामीले लगानी बढाउने भनेका छौं । लगानी बढाउँदा पनि केही न केही राजस्व राज्यलाई प्राप्त हुन्छ नै । चालू आर्र्िथक वर्षमा सरकारले लिएको ७ सय ३० अर्बको लक्ष्य छ नि ! यसमा २(४ अर्ब तलमाथि भए पनि यो राजस्व उठ्छ । औसतमा २० देखि २१ प्रतिशतको राजस्वको ग्रोथ छ । यही आधारमा हेर्दा पनि डेढ खर्बको राजस्व त्यही आउँछ । त्यो थपिनेबित्तिकै अहिलेकै लक्ष्य अनुसार पनि ९ खर्ब पुग्छ । अर्को भनेको, हामीले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएका छौं, त्यसमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो चुहावट भइरहेको छ । सरकार बलियो छ, दायरा बढाउँछौं, गहिराइ बढाउँछौं भनेको ठाउँबाट पनि २० प्रतिशत राजस्व बढ्छ । यसका लागि दर बढाउनु पर्दैन । अहिलेको राजस्वको वक्यौता १ सय ३४ अर्बको छ । त्यसको २० प्रतिशत उठाए पनि २० अर्ब आउँछ । अर्को भनेको अहिलेको कर प्रशासनलाई चुस्त पारदर्शी बनाउन सक्यौं भने राजस्व उठाउन समस्या होइन ।